उमेरभन्दा चाडै किन बढ्दैछन् बालबच्चा ? | सुदुरपश्चिम खबर
उमेरभन्दा चाडै किन बढ्दैछन् बालबच्चा ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १८, २०७८ 11
हिजोआज बच्चाहरुमा समयभन्दा अघि नै परिपक्व हुने क्रम बढ्दो छ । सामान्यतया १३ वर्षदेखि किशोरावस्था सुरु हुने भनिए पनि समयअघि नै परिपक्व हुने परिपाटीका कारण यो क्रम बढेको पाइन्छ । अहिले बच्चाहरु शारीरिक हिसाबले उमेरभन्दा चाडै परिपक्क हुँदा यसले फाइदामात्रै होइन घाटा पनि निम्त्यिाएको छ । हामीले मनोविज्ञ गोपाल ढकाललाई समयअघि नै बच्चाहरु परिपक्व हुनुको कारण, यसको समस्या र निवारणको उपाय के–के हुन सक्छ ?
हिजोआजका बच्चाहरुमा परिपक्व हुने उमेर घटेर गएको छ । पहिले १३ वर्षमा सुरु हुने किशोरावस्था अहिले ८–९ वर्षदेखि नै सुरु हुन थालिसकेको छ । यसको पछि विभिन्न कारणहरु छन् । जस्तो, खानपानमा आएको परिवर्तन, सूचना प्रविधिले ज्ञानको क्षेत्रमा गरेको विस्तार जस्ता कारणले पनि बच्चाहरु समयअघि नै परिपक्व बन्ने गरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको खानपानको कारणले शरीरमा ल्याएको परिवर्तन र सूचना प्रविधिका कारणले बुझाइ वा मानसिक र स्वास्थ्य चेतनामा ल्याएको प्रभावका कारण नै बच्चाहरु छिट्टै परिपक्व बन्न थालेका हुन् ।
छिटो परिपक्व हुँदाको घाटा
धेरैलाई लाग्न सक्छ बच्चाहरु त छिटो परिपक्व हुनु आफैँमा अभिभावकको लागि खुसीको कुरा हो । तर यसको पछि छुट्टै नकारात्मक पक्षहरु छन् । बालापनको समय भनेको चञ्चल समय हो । यो समयमा बिस्तारै मान्छेको शारीरिक र मानसिक विकास हुँदै जान दिनुपर्छ । यो समयमा बच्चाहरुलाई कुनै पनि जिम्मेवारीबोध र थप दबाब दिनुहुँदैन । तर चाँडै परिपक्व हुँदा मान्छेले अनावश्यक जिम्मेवारीको चिन्ताले बालापनमा उसले जुन खालको स्वतन्त्रता र मनोरञ्जनात्मक रुपमा विकास हुने चरण हुन्छ । त्यो चरण बदलिन्छ । त्यसैले चाँडो परिपक्व हुनु पनि घाटाको कुरा हो ।
सानै उमेरमा यौनिक परिपक्वताको समस्या
शारीरिक र मानसिक परिपक्वतासँगै बच्चाहरुमा चाँडै नै यौनिक परिपक्वता पनि हुन्छ । जुन एक समस्या हो । चाँडो परिपक्व हुनु र ढिलो परिपक्व हुनुमा हामी बोइलर कुखुरा र लोकल कुखुराको भेदलाई तुलना गर्न सक्छौं । ढिलो परिपक्व हुनुको अर्थ शारीरिक र मानसिक रुपमा बिस्तारै विकास हुँदै जाँदा यसले पछिसम्म शरीर सुदृश बनाउँछ । अन्यथा बुढेशकालको उमेरमा पनि मान्छेले बच्चाको जस्तो व्यवहार गर्छ । जुन उपयुक्त होइन ।
छिटो परिपक्व हुने बच्चामा अभिभावकको व्यवहार
छिटो परिपक्व हुने बच्चाहरुमा अभिभावकले सामान्य बच्चालाई जस्तो व्यवहार नगर्न सक्छन् । कतिपय त्यस्ता विषयहरु पनि आइरहेका छन् । कुनै कुरामा बच्चाले ठूलाको जस्तो व्यवहार ग¥यो भने अभिभावकले आफूसँग तुलना गरेर हेर्छन् । जुन व्यवहारले बच्चाहरुमा अनावश्यक दबाब(टर्चर) महसुस गर्न सक्छन् । त्यसैले समयभन्दा छिटो परिपक्व हुनुको फाइदासँगै नोक्सानी पनि उस्तै हुन्छ ।
अभिभावक र बच्चाको बीचको असमझदारीको खाडल कसरी पुर्ने ?
अभिभावक र बच्चाहरुमा जेनेरेसन ग्यापले गर्दा केही असमझदारी हुन सक्छन् । हिजोआजका धेरै बालबालिकाहरु छिटो परिपक्व हुने भएकोले पनि ढिलो परिपक्व हुने अभिभावक र छिटो परिपक्व हुने बालबालिकाको बीचमा कुनै न कुनै असमझदारी हुन सक्छ । त्यसको लागि बालबालिकाकाको विकासको क्रमको प्रक्रियाबारे अभिभावकहरुलाई ज्ञान गराउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपाय हो । पहिले अभिभावकहरु यसमा जानकार भए भने मात्रै बच्चाहरुलाई पनि सौहार्दपूर्ण रुपमा आवश्यक ज्ञान दिन सक्छन् । त्यसैले अभिभावकहरुले नै बच्चाको स्वभावको आधारमा यसबारे ज्ञान लिनु जरुरी छ । मनोविद् गोपाल ढकालले अनलाइनखबरमा लेखेका छन्।
महाकालीको बाढीले घेरेपछि बीचमा फसे ५ जना,